Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_lvl(&$output, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth, $args) should be compatible with Walker_Nav_Menu::start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array, $id = 0) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 Warning: Declaration of DropDown_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth) should be compatible with Walker_Nav_Menu::end_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = Array) in /customers/9/4/e/arlaadii.net/httpd.www/wp-content/themes/worldwide-v1-02/include/plugin/dropdown-menus.php on line 177 wararka maanta-arlaadii.net » Madaxda Dalka oo Soo Saartay Baaq ah Qiyaano lagu Dhagrayo Doorashada 2016ka
Madaxda Dalka oo Soo Saartay Baaq ah Qiyaano lagu Dhagrayo Doorashada 2016ka
Dr. Saciid Ciise Maxamud (SACIM) Gudoomiyaha Xisbiga Dadka saciidciise258@aol.com Maine, United States of America.
Oktober 29, 2015, ayaa waxey soo saareen koox qowleysato ah bayaan tilmaamaya habraaca loo marayo doorashada 2016ka.Qaabka ay u qorsheeyeen in loo maro geedi-socodka doorashada 2016ka waxey ku maleegeen qiyaano ay ku doonayaan in madaxda hadda jirta ay dib ugu soo noqdaan xukunka dalka. Waxey koxxdaas curiyeen goloyaal aan raacsaneyn sharciyada dalka u degsan iyo rabitaanka dadka oo ay iyagu madax ka yihiin sida madaxweynaha, gudoomiyaha baarlamaanka, raisulwasaaraha, madaxda dowlad-gobeleedyada, wakiilka qaramada midoobey. Kooxdaas qowleystadaa waxey isi siiyeen awooda ay ku go’aamiyeen liis keliya oo ka socda isla kooxdaas iney hogaanka u qabtaan go’aamada laga gaarayo qaabka loo gelayo doorashada iyo natiijadooda, iyagoo hadba Nairobi dastuurka si qarsoodiya wax looga soo badelayo si ay u waafajiyaan danahooda iyo ku sharciyeynta golayaashooda.
Golayaasha sida xaaraanta ah loo sameeyey waxey kala yihiin: Madasha Hogaanka Qaranka; Madasha Wadatashiga Qaranka, Gudiga Hawl-FududeyntaDoorashada, iyo Gudiga farsamada Doorashada. Dhamaan xubnaha ay ka kooban yihiin golayaashaas waa ama madaxda dowlada Muqdishu iyo kuwa maamul-goboleedyada ama wakiilo ay soo xusheen. Madasha Hogaanka Qaranka waxey ka kooban tahay afar qofood oo kala ah: wakiilka Qaramada Midoobey, madaxweynaha, gudoomiyaha, iyo raisulwasaaraha Soomaaliya, waxeyna kooxdan isku caleemo saareen hogaanka dalka ugu sareeya oo go’aaminaya sida ay noqon doonto natiijoonka la qorsheeyey iney ka soo baxaan doorashada 2016ka, waxeyna golahaan marooqsadeen awoodi sharci ee maxkamada dastuurka iyo tan maxkamada sare ama gudiga madaxa-banaan ee doorashooyinka qaranka.
Madasha wadatashiga Qaranka waxey ka kooban tahay Madasha Hogaanka Qaranka oo lagu soo kordhiyey Shan ka mida madaxda dowlad-goboleedyada, wasiiro iyo xildhibaano ay soo xusheen madaxda dalka iyo kuwa gobolada. Ujeedada loo sameeyey golahan waa in lagu maja-xaabiyo golaha shacabka oo ay awoodooda la wareegaan wixii ka dambeeya bilowga sannadka 2016ka, taas oo ka dhigan in si dadban baarlamaanka looga wareejiyey awooda, xeeladaas oo si daboola u tilmaameysa habraac lagu kala dirayo xildhibaanada baarlamaanka.
Gudiga Hawl-Fududeynta Doorashooyinka oo ay hogaaminayaan wasiiro laga soo xushay xukuumada iyo wakiilo qaasa oo ka socda xubnaha Madasha Hogaanka Qaranka. Ujeedada loo sameeyey golahan waa inuu madaxda qaranka iyo dowlad-goboleedyada mideeyo aragtidooda si loo helo liis keliya oo ay danahoodu heshiis ku wada yihiin, wuxuuna sidoo kale soo uruurinayaa misaaniyada ku baxeysa hirgelinta ka guul-gaarida qorsheyaalkooda lagu afduubayo doorashada 2016ka. Waxaa si gaara gudigan loogu xilsaaray meelmarinta qabasoomida shirweyneyaasha dowlad-goboleedyada (regional conventions) oo ah qaabka ugu weyn oo ay ku doonayaan iney ku ansixistaan natiijada ay ku doonayaan iney ku meelmarsadaan go’aan ka qaadashada qaabka ay u dhaceyso doorashada 2016ka.
Gudiga Farsamada Doorashooyinka oo ka kooban kaadiriinta taabacsan xubnaha Madasha Hogaanka Qaranka iyo lataliyeyaal magac-u-yaal ah oo dibeda iyo gudaha laga keenay, kuwaas oo la hordhigayo qorsho dhameystiran oo ay u hawl-geleyaan farsameyntii loo fulin lahaa, waxeyna u shaqeynayaan dhaqan ku saleysan xuuraansi iyo borobagaando lagu mariin-habaabinayo rayiga dadweynaha iyo kan caalamka. Si ay u fuliyaan hawlahooda waxey adeegsanayaan xeeladaha doorashooyinka la isku dabamariyo(election frauds) ama la isugu kala qaldo hanaanada doorashooyinka, iyagoo adeegsanaya warbixino beenabuura iyo qoraalo aan ka turjumeyn afkaaraha ay ka soo uruurinayaan dadka, doodaha, iyo kulamada wadatashiga. Gudigan waa midka maamulaya dhaqaalaha oo loo marayo soo xulista, laaluushida,iyo kala dilka mucaaradka, wuxuuna adeegsanayaa warbaahinta dowladda iyo kuwo si gaara heshiis loola galay si ay u baahiyaan warbixinada muujinaya in wadatashiyada ay u socdaan si horumar leh oo go’aamo guulo ah laga gaarey wadatashiyada. Waxaa kaloo qorshahooda ka mid ah hanjabaada ay u geysanayaan mucaaradka iyo caburinta saxaafada xorta ah, waxeyna ku astaameynayaan shaqsiyaadka ay is diidan yihiin carqaladeynta nabada iyo kicinta colaadaha si talaabo wadajira dalka iyo caalamkuba uga qaado shaqsiyaadkaas.
Bayaanka ay soo saartay kooxdaas isi siisay awooda dalka waxey si toosa u qaateen heerka doorashada dowlad-goboleedka, taas oo salka ku haysa Puntland, Galmudug, Muqdisho, Koofur Galbeed, iyo Jubba oo dhamaantood dano-wadaag la ah madaxda isku caleemo saartay Madasha Hogaanka Qaranka. Taas waxey meesha ka saartay ineysan jirin qaabab kale oo doorasho loo kala dooranayo, waayo baaqaas ayaa go’aamiyey in Dowlad-goboleedyo shan ah loo qabanayo kulamo qaadanaya midkiiba shan saac oo keliya. Kaasna waxaa xiga kulan ay yeelanayaan Madasha Wadatashiga Qaranka oo soconaya afar saac oo keliya, kaas oo ujeedada loo qabanayo ay tahay in lagu dhawaaqo qaabka ay u dhaceyso doorashada 2016ka.
Habdhaqankaas qaldan waxaa ka muuqata kelitalisnimo in lagu hogaaminayo qaabka loo marayo doorashada 2016ka. Waxaa kaloo muuqata in go’aamada la qaadanayo horay loo sii diyaariyey dood iyo wadatashi la’aan, waayo kulamada ay qorsheeyeen ma ahan kuwo ay shacabku uga qeybgelayaan talooyinkooda, laakiin shirarkaas waxaa laga soo buuxinayaa dad horay loo sii diyaariyey oo aysan jirin wax dooda oo ay gelayaan, waxa keliya ee loo keenayna ay tahay iney taageeraan talooyinka la soo hordhigo. Dhaqanka qowleysatanimada ku saleysan oo ay ku heshiiyeen madaxda qaranka iyo kuwa maamul-goboleedyada ayaa ka turjumayaa iyagoo ah musharixiin haddana iney jideeyaan qaabkii iyaga dib loogu soo dooran lahaa oo ay saldhig uga dhigeen xulista ay u wakiisheen madaxda maamul-goboleedyada, kuwaas oo bedelaya hogaamiye dhaqameedka si ay liiska xildhibaanada horay loo qorsheeyey ay u soo gudbiyaan, xildhibaanadaas oo la filayo iney soo doortaan madaxweynaha Soomaaliya.
Xisbiga Dadka waxey si xoogan u cambaareynayaan bayaanka ka soo baxay qowleysatadaas oo aan xaq u laheyn iney soo go’aamiyaan meelmarinta mustaqbalka masiirka siyaasadeed ee shacabka Soomaalida. Xisbigu ma aqbalayo talooyin aan ka soo bixin gudi dhexdhexaada oo si madaxbanaan ugu shaqeynaya fikradaha cabiraya rabitaanka shacabka Soomaaliyeed, waxaana shardi u ah gudigaas in lagu soo xulayo aqoon, wadaniyad, iyo ineysan ahayn musharax u taagan xilalka loogu tartamayo doorashada 2016ka. Xisbigu wuxuu aaminsan yahay in hindisoyaasha ka dhex-muuqda baaqaas ay noqonayaan kuwo ku dambeeya fashil, kuwaas oo dibeda soo digaysa dhagarta ay ku heshiiyeen madaxda dowlada Soomaaliya, wakiilka Qaramada Midoobey, iyo madaxda maamul-goboleedyada.
Xisbiga Dadka wuxuu u soo jeedinayaa siyaasiyiinta madaxa banaan, xisbiyada siyaasadeed, iyo hogaamiyeyaasha qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed iney baaqaas ka yeeshaan wadatashi lagu soo bandhigayo jid ka duwan midka ay raadraacistiisa ku soo saareen baaqa ay soo jeediyeen oo ku saabsan geedi-socodka lagu hiigsanayo doorashada 2016ka. Xisbiga Dadka wuxuu qaba in doorashada 2016ka loo maro qaab ku saleysan doorashada ergooyinka heer qaran ( national electoral college), kaas oo xubnihiisu ka kooban yihiin boqol kun oo ergo oo qeybaha kala duwan ee bulshada ka wada kooban, waxaana xulistooda loo maraya gudi dhexdhexaada oo madaxbanaan oo haysta kalsoonida shacabka, kaas oo ay si wada jira u soo xulayaan siyaasiyiinta Soomaaliyeed ee ku kala jira xisbiyada siyaasadeed, ururada bulshada, iyo siyaasiyiinta madaxabanaan oo aan ka tirsaneyn dowladaha ka jira dalka.
Doorka ugu weyn ee laga rabo ergada heerka qaran waa iney kala saarto xisbiyada siyaasadeed oo ay ku soo koobto saddex ah xisbiyo qarana, in doorashada loogu tartamayo kuraasta xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya ay codeyntooda ugu loolamaan saddexda xisbi, xisbiyadaas oo soo buuxinaya soo magacaabista kuraasta ay ku guuleysteen. Waxey sidoo kale ergedaas si toosa u soo dooranayaan madaxweynaha dalka iyagoo u kala codeynaya saddexda musharax ee ka soo kala jeeda saddexda xisbi. Qaabka doorashadaas waxey raacsan tahay nidaamka ay shacabku si toosa ugu soo dooranayaan madaxweynahooda (direct democracy), waxaana nidaamkan la adeegsadaa marka aysan dalka ka jirin dowlad haysata kalsoonida dadweynaha oo ku timid nidaamka wakiilnimada ku saleysan (representative democracy). Ergooyinkaas heerka qaran waxey afti gelinayaan dastuurka dalka oo u codeyntiisu ay u baahan tahay dib u fiirin in marka hore lagu sameeyo si looga saaro qodobada dareenka xasaasiyada gelineya shacabka Soomaaliyeed
Hanaanka ku saleysan doorashada ergada heerka qaran waa mid ka turjumaya u adeegida maslaxda ummadda Soomaaliyeed, taas oo meesha ka saareysa kala-xirnaanta ergooyinka ay horkacayaan hogaamiye dhaqameedyada beelaha ama qabqablayaasha madaxda ka ah dowlad-goboleedyada, ergooyinkaas oo aragtidoodu ku kala xiran tahay beelo ama gobolo, kuwaas oo aan raacsaneyn maslaxada guud ee qaranka. Ergada heerka qaran taladoodu waa isku furan tahay, waxaana adag in la laaluusho ama la isku dayo iney dano gaara meelmarinteedu ka hirgasho. Ergadaas waxaan shaki lahayn iney muraayad u noqoneyso dhamaan qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed. Waxa keliya oo aan ka higaleyn ergadaas heerka qaran waa in qabiil wax lagu doorto ama dowladnimada lagu saleeyo qeybsi beeleed, waayo hanaanka doorashadaan waxey fursad siinaysaa xisbiyada siyaasadeed oo noqonaya habraaca loo maro tartanka xilalka siyaasdeed ee dalka. Xisbiyada qaran iyagoo ka duulaya fikradahooda siyaasadeed ayey soo xulanayaan wakiiladooda siyaasadeed iyagoon u fiirin heybtooda, laakiin ku saleynaya xulista xubnahood aqoonta, kartida, hufnaanta, iyo qibrada waxqabadkooda.
Shacabka Soomaaliyeed waxaan u soo jeedineynaa iney diidaan dhagarta dibeda laga soo maleegey oo ay horkacayaan madaxda ku fashilantay hogaaminta dalka iyo qabqablayaasha madaxda isaga dhigay dowlad-goboleedyada oo danahooda u dabagalay madaxda dalka iyo wakiilka Qaramada Midoobey oo horkacaya wakiilada bulshada caalamka. Qowleysatadaas waxey ku fashilmeen iney dalka ka hirgeliyaan dimoqaraadiyada ay rabaan shacabka Soomaaliyeed, waayo meeshii loo baahnaa in dhaqanka aqoonta lagu saleeyo hanaanka dimoqaraadiyada aya saldhig looga dhigay dhaqanka beelnimada ee ku saleysan 4.5. Guuldarrada soo wajahday wakiilada bulshada caalamka oo saddex sano kadib dadaaladoodu ay noqon waayeen kuwo lagu guuleysto ayaa hadda dantu biday iney dhinacooda ka galaan mariin-habaabinta shacabka Soomaaliyeed iyo caalamka oo ay ka dhaadhicinayaan in xalka keliya ee shaqeyn kara inuu yahay habraaca doorasho ee dib u soo celinya madaxdii fashilantay, kuwaas oo danaha shisheeyaha hebednimo ugu shaqeyey.
Xisbiga Dadka wuxuu ka soo horjeeda tilaabooyinka qaldan oo ay talowadaag ka yihiin bulshada caalamka oo uu horkacayo wakiilka Qaramada Midoobey. Waxaan aad uga xunahay joogitaanka wakiilada Midowga Yurub, Qaramada Midoobey, Midowga Afrika, wakiilada wadamada Khaliijka, Turkiga, Mareykanka, iyo Ingriiska oo saddex sano kadib weli ku hawlan waqabad been abuura iyo warbixino tilmaamya horumar aan jirin oo aan xaqiida jirta ka turjumeyn, ugu dambeystiina ku soo dhamaatay balanfuryo ku aadan qabsoomida doorasho dimoqaraadiya oo shacabka Soomaaliyeed ay si xora oo xaqa ay ugu soo dooranayaan madaxdooda 2016ka. Waxaan u soo jeedineynaa wakiilada bulshada caalamka iney faraha kala baxaan hawlaha ay sida joogtada ah kala shaqeynayaan Soomaaliya iyo in ciidamadooda shisheeyaha ay kala baxaan Soomaaliya, taas oo dhalineysa in Soomaaliya ay sida runta ah isugu soo noqoto oo maamulkeeda lagu saleeyo xaqiiqda ka shaqeyn karta dalka. Waxaa hadda muuqata in joogitaanka shisheeyuhu uu taageersan yahay dulmiga ka jira Soomaaliya iyo dhismayaasha maamulo iyo nidaamyo aan raacsaneyn dhaqanka wanaagsan ee maslaxada dowladnimada Soomaaliyeed. Waxaa la boobay hantida qaranka iyo kuwa ay ku deeqeen caalamka, waxaana boobkaas goob-joogayaal iyo lataliyeyaal ka ah wakiilada bulshada caalamka. Ma jirto cid ka mid ah madaxda wakiiladaas iyo ururadooda caalamka ama kuwa Soomaalida iyo hayadahooda ah NGO-yada oo inta lagu soo eedeeyey dembiyo la soo baaray, haddana lagu qaaday ciqaabtooda ama ku muteystay cunoqabateyn.
Xisbiga Dadka wuxuu rumrysan yahay in qowsaarnimo, qabqablanimo, iyo qowleysatanimo aysan ku hirgeli doonin doorashada 2016ka, waxaana lagama maarmaan ah in la jooojiyo amarada shisheeyaha oo dalka dibeda looga maamulayo. Xisbigu wuxuu aaminsan yahay in faragelinta shisheeyuhu ay sii murjineyso xaalada adag ee ka jirta dalka, marka ay talo faraha ka baxdana ay dalka isaga baxayaan siidii dhacday 1991. Madaxda dalka iyo kuwa maamul-goboleedyada waa iney ka baxaan maaweelada ay ku jiraan, waayo ma jiraan cid ay wakiil ka yihiin iyo shacab raacsan hogaamintooda. Wadatashi sal-balaaran wuxuu ku hirgalaa kalsooni shacab oo ka timaada abaabul ay si madax-banaan uga qeyb-galaan dhamaan wakiilada qeybaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed, kuwaas oo siyaasad mideysan oo loo wada dhan yahay doorashada dalkooda si dimoqaraadiya ku meel-marin kara.
Baaqa ay soo saareen madaxda dalka waa mid mudnaanta lagu siinayo xulafeysiga madaxda dowlad-goboleedyada, laguna xaq duudsiinayo siyaasiyiinta madaxabanaan, Mucaaradka, xisbiyada siyaasadeed, iyo guud ahaan madaxbanaanida ay mudan yihiin qebaha kala duwan ee bulshada Soomaaliyeed oo ay kalintooda uga qeyb qaadan lahayeen siyaasada dalkooda iyo doorashooyinka 2016ka. Doorashada ku saleysan habraaca ergooyinka heerka qaran waa mid fursad siinaya beelaha, degmooyinka, gobolada, qurbo joogta, mucaaradka aan tegi karin maamulada dalka ka jira, iyo gaar ahaan dadka la caburiyo oo aaminsan iney codkooda ku doortaan fikirka ay aaminsan yihiin cidii la wadaagta. Doorashada 2016ka waa in fursad lagu siiyo in xilalka loogu tartamo hanaanka xisbiyada siyaasadeed oo ay fududahay iney wakiilada shacabka soo xushaan iyo iney abuuraan jawi ku saleysan isla xisaabtan oo xildhibaanadu ay si dhaba u mataleyaan danaha guud oo ay wakiilka uga yihiin bulshada ay wakiilka ka yihiin. Baaqa ay soo saarto qowleysato waa mid doorashada 2016ka u horseedaya in lagu waayo wixii laga soo shaqeynayey si Soomaaliya ay u noqoto dal leh dowlada madaxbanaan oo shacabkeedu soo doorto.
Daawo Ururka Islaamiga Isis Oo Baahiyey Muuqaal Diyaaridii Ruushka Ee Sebtigii Lasoo Dhafay Ku Dhacday Dalka Masar
Daawo Sawirka Maanta Amin Arts Uu Ka Sameeyey Madaxweynaha Iyo Ra’iisul Wasaaraha Isku Shandheenta Golaha Wasiirada